Ahoana ny Fomba Ahazoana Photoshop CS6 MAIMAIM-POANA sy ara-dalàna
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Ahoana Ny Fomba Ahazoana Photoshop CS6 Maimaim-Poana
Lisansa: Fitsarana maimaim-poana
Mifanentana: Windows, Mac OS
Te hampiasa Photoshop nefa tsy mandoa famandrihana $ 10 volana? Andao hojerentsika ny fomba hahazoana Photoshop CS6 maimaimpoana, ary koa ny loza miafina amin'ny dikan-teny PS vaky, avereno jerena ireo safidy Photoshop CS6 maimaim-poana tsara ary sintomy ireo hetsika Ps maimaimpoana na overlay.
Mampalahelo fa nandà tanteraka ny famoronana ireo vokatra amin'ny laharana CS ny Adobe Company tato ho ato. Ny hany tokana dia ny CS2.
Androany, tsy azo atao ny misintona ny sary feno Photoshop CS 6 maimaim-poana raha tsy mandika lalàna. Ny fomba tokana ahazoana ilay rindrambaiko tadiavina izay azoko atolotra dia ny mividy kinova lisansa amin'ny eBay.
Vokatr'izany dia hahazo programa ofisialy ianao. Mazava ho azy, tsy tohanan'ny mpandraharaha izy io fa, na izany aza tsy manana bibikely izay azonao jerena amin'ny kinova piraty.
Aza maika hanatsoaka hevitra fa tsy misy fomba hahazoana maimaimpoana, navoakan'ny Photoshop ofisialy. Nanomana torohevitra mahasoa maro momba ny fomba hahazoana Photoshop maimaim-poana aho nefa tsy manimba ny asan'ny fanovana sary manan-danja.
Tombontsoa maimaim-poana Photoshop CS6:
Fitaovana manara-penitra manara-penitra
Fahaiza-manao fanodinana sary tsy manam-paharoa
Mifanaraka tsara amin'ny fanovana ireo endrika sary isan-karazany
Fanomezana tsotra ny sary kalitaon'ny orinasa
Mahavita manova horonantsary na sarimiaina
Famindrana rakitra tsy misy ezaka amin'ny programa hafa
Inona no atao hoe Photoshop CS6?
Navoaka tamin'ny 2012 ity kinovan'ny Photoshop ity ary tsy anisan'ny Creative Cloud. Saingy ampahany amin'ny Creative Suite izy io ary azo vidiana amin'ny alàlan'ny fandoavam-bola indray mandeha tsy misy famandrihana.
Ny mampiavaka ny Photoshop CS6 amin'ny kinova teo aloha dia saika fitoviana mitovy na dia amin'ny Photoshop aza 2022 , ankoatry ny fiasa maoderina sasany. Noho izany, CS6 dia mety ampiasaina na amin'ny 2022 .
Afaka mampiasa Photoshop CS6 maimaim-poana ve aho?
Amin'izao fotoana izao, Adobe dia nijanona tanteraka nanohana ny kinova CS6, ary tsy azo atao ny misintona azy avy amin'ny tranonkala ofisialy. Aza mianjera amin'ny fitaky ny tranokala manolo anao misintona Vaky ny Photoshop CS6. Ny fampidinana programa toy izany dia mety hiteraka olana maro amin'ny PC-nao.
Ohatrinona ny vidin'ny Photoshop CS6?
Mbola afaka mahita Photoshop CS6 amin'ny Amazon sy eBay ianao. Matetika izy ireo dia amidin'ny olona izay nividy ilay kinova fandaharana anaty boaty tamin'ny fotoana namoahana azy tamin'ny taona 2012. 720 $ eo ho eo ny vidiny.
JEREO NY VOLA
Misy fihenam-bidy amin'ny Photoshop CS6?
Eny, fa ho an'ny andiany farany an'ny Photoshop CC. Afaka mahazo fihenam-bidy 35% ka hatramin'ny 60% amin'ny famandrihana Photography Plan na ny fisoratana anarana All Apps Plan ianao. Manoro hevitra anao ihany koa aho mba hijery tsara Fihenam-bidy ho an'ny mpianatra Photoshop, izay hanampy anao hitahiry 60% amin'ny programa Adobe rehetra.
JEREO NY FIVORIANA
Araka ny efa nolazaiko teo aloha, tsy misy Photoshop CS 6 maimaim-poana amin'izao fotoana izao. Photoshop azo entina tsy rindrambaiko ofisialy koa.
Fa alao alao sary an-tsaina ny toe-javatra iray izay nisintahanao ny piraty piraty an'ny rindrambaiko avy amin'ny loharano torrent ary mamaky ity lahatsoratra ity ianao. Inona ny vokatr'izany fampidinana Adobe CS 6 izany ary inona no tokony antenainao?
1. Manomboha mitady mpisolovava tsara
Mpamatsy vola amerikana 5 lehibe indrindra - Verizon, AT & amp; T, Cablevision, Comcast ary Time Warner - taona maro lasa izay dia nanangana rafitra iray hiadiana amin'ny fanaparitahana tsy ara-dalàna ireo fitaovana manana zon'ny mpamorona amin'ny Internet. Tsotra ny antony - ny fampiasana lozisialy tsy mitsaha-mitombo.
Te hahafantatra izay mandrahona anao hatrehana ve ianao? Ny zavatra voalohany dia fampitandremana avy amin'ny mpamatsy. Ankoatr'izay, azo inoana fa ho voasakana ny fidiranao amin'ny Internet. Manaraka izany, hahazo taratasy momba ny fitsarana ianao. Ary araka ny mitranga matetika dia voatery mandoa onitra 1 000 $ ianao.
2. Angataho amin'i Google ny ivon-toerana fanamboarana akaiky indrindra
Fantatrao ve ny viriosy? Noho izany, tsy maintsy diso fanantenana aho fa tsy azo sarahina ny rindrambaiko piraty sy ny viriosy. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia avo kokoa noho ny hatramin'izay ny mety hidiran'ny PC anao.
Tsotra ny valiny. Rehefa tapaky ny mpijirika ny kaody loharano dia mahazo fidirana tanteraka izy, midika izany fa azony atao ny mampiditra virus ao aminy.
3. Tsy maintsy zatra ny sigara ianao
Talohan'izay dia nanoratra aho fa ny rindrambaiko piraty dia midika fanovana ny kaody loharano. Toy ny mitranga matetika - ny hackers dia tsy mitandrina amin'ny antsipiriany tanteraka, izay midika fa misy ny famafana ny singa tsy mety, ary vokatr'izany dia tsy afaka manao hetsika ilaina ilay programa.
4. Tsy misy fanavaozana
Raha efa nampiasa rindrambaiko tsy ara-dalàna ianao dia mety ho fantatrao fa ny tena maha samy hafa ny kinovan'ny piraty amin'ny iray ara-dalàna dia ny tsy fisian'ny fanavaozam-baovao. Ny rindrambaiko alainao dia hampifandray maharitra amin'ny tambajotra, izay midika fa tsy hahazo fanavaozana ianao.
Photoshop CS6 Free Version mitovy
Raha maniry hampiasa Photoshop CS6 maimaim-poana ianao na ny dikanteny hafa nefa tsy mandoa vola, dia misy fomba maro ahafahanao manao azy.
Photoshop CS6 Free Online
Mampiasà PHOTOSHOP ONLINE
Ny dikan-tranonkala dia mahomby sy mahitsy
Fitaovana ho an'ny retouching sary matihanina
Ny tonian-dahatsoratry ny sary dia safidy alefa ho an'ireo vao manomboka sy tompona PC miadana
Fandidiana tsy milamina
Adobe Flash Player no ilaina
Ny mpankafy sy ny vao manomboka sasany dia matahotra ny hiasa ao amin'ny Photoshop noho ny fandidiana sarotra sy ny fiasa maro izay mila fotoana be dia be hianarana. Raha iray amin'izy ireo ianao nefa mbola te hanohy ny fandrosoana ary hitady fitaovana matanjaka mitovy amin'izany dia tandremo ity programa ity.
Izy io dia manana interface sy fitaovana tsotra kokoa izay fehezin'ny slider. Misy zavatra mora kokoa ve? Ankoatr'izay, ity programa ity dia manana fepetra kely kokoa ho an'ny rafitra fiasa.
Editorial Photoshop Express
Mampiasà EDITOR EXPRESS EXPRESS
Azo ampiasaina ivelan'ny Internet
Dika ho an'ny smartphone na tablette
Fitaovana marobe ho an'ny fanitsiana loko
Fitaovana vitsy ho an'ny retouching sary
Miasa amin'ny smartphone na tablette matetika ve ianao? Maninona raha ampiasaina amin'ny fanovana sary? Editorial Photoshop Express namboarina tsy ho an'ny PC sy ny mpitsidika fotsiny. Azonao atao koa ny mampiasa azy amin'ny finday avo lenta, na dia tsy mampiasa Internet aza.
Na izany na tsy izany, afaka manao fanovana sary tsotra izy io, manitsy rakitra GIF sy RAW, mampiditra sivana na effets isan-karazany, manampy watermarks na mamorona sora-baventy isan-karazany.
Azonao atao izany rehetra izany amin'ny fampiasana rindranasa finday. Mahaliana ny manamarika fa ny kinova finday dia manohana ny Creative Cloud, izay midika fa afaka mifindra amin'ny Photoshop CC 2022 ianao ary mamindra sary eo anelanelany.
Fitsapana maimaim-poana amin'ny Photoshop
FAMPANDROSOANA TRATRA MAIMAIMPOANA
Fandraisana tsy voafetra amin'ny fampiasa sy ny fahafaha-manao mandritra ny fito andro
Midira amin'ny Adobe Lightroom CC
Fidirana amin'ny fitahirizana Creative Cloud
Fitsarana tena fohy
Ny fandoavana dia takiana aorian'ny fito andro fitsarana
Ianao ve mitady Photoshop CC 2022 maimaim-poana? Midika ho kinova fitsapana izay heverin'ny ankamaroan'ny mpampiasa ho programa manana fampiasa tsy voafetra aho. Tena diso hevitra ianao raha mieritreritra izany koa.
Adobe Company dia namorona rafitra tsy manam-paharoa. Mamela ny fampiasana ny rindrambaiko mandritra ny fito andro hahitana ny maha samy hafa an'ity programa ity amin'ny safidy hafa. Raha atao teny hafa, dia afaka mankafy ny fampiasa Photoshop ara-dalàna tanteraka ianao nefa tsy misy fetrany.
Fividianana Photoshop CS6 maimaim-poana
Zahao ireo editera sary ireo safidy Photoshop maimaim-poana amin'ny resaka retouching sary fototra. Azonao atao ny misintona azy ireo maimaimpoana ary manova ny sary saika mitovy amin'ny tolotra Photoshop.
Fandraisana an-tanana maimaim-poana
Ampy tsara amin'ny fanovana sary ifotony
Fitaovana maro be ho an'ny sary nomerika
Sokafy kaody loharano
Tsy mandeha amin'ny sehatra Linux sy Mac OS
Paint Net no tonian-dahatsoratry ny raster maimaimpoana tsara indrindra ho an'ny Windows misy loharano misokatra. Ny programa dia manana interface tsotra sy fitaovana matanjaka sy mandroso tsara.
Ny hetsika lehibe azonao atao dia ny fanitsiana sary ifotony, ny fanitsiana ny loko ary ny lahasa maro isan-karazany: slider sy loko azo ovaina amin'ny sary, sarontava sy sosona, borosy, effets ary sivana.
Amin'ny ankapobeny, ny Paint Net dia safidy iraisan'ny rehetra ho an'ireo mpaka sary vaovao na amateurs izay tsy mila ilay rindrambaiko misy laharam-pahamehana amin'ny famerenana sary.
Optimised ho an'ny PC malemy
Ny interface dia mitovy amin'ny Photoshop
Mamela hanao retouching sary matihanina
Tsy afaka manao fanitsiana loko matihanina
GIMP no ho safidy tsara indrindra raha manana rafitra fiasa Linux ianao. Hanombohana azy, GIMP dia mpamoaka sary sary mivelatra marobe.
Ny interface sy ny fampiasa ao aminy dia mitovy amin'ny Photoshop. Betsaka ny fitaovana ampiasaina amin'ny fanitsiana sary sy fanitsiana loko, ny safidin'ny lahatsoratra, ny sarontava, ny sosona, ny borosy ary ny vokatra isan-karazany.
Raha tsy manome aingam-panahy anao ny rindrambaiko loharano misokatra dia mety tsy fantatrao ny momba ny mety hanampiana fiasa na fitaovana amin'ny tanana. Ankoatr'izay, azonao atao ny manamboatra ilay bibikely hitanao, tsy mila miandry fanavaozana isan-karazany.
Ny tena lesoka dia ny tsy ahafahanao mampiasa kinova GIMP feno ho an'ny Mac OS. Ny kinova fanaova-jirika ihany no misy, fa voaloa.
Fandraisana mifankahalala amin'ny mpampiasa
Betsaka amin'ireo singa haingon-trano amin'ny vanim-potoana
Mety amin'ny fanitsiana loko fototra sy fanovana sary
Fampiasana isan'ny voafetra tsy misy fisoratana anarana
Raha mitady programa misy interface tsotra be ianao miaraka amin'ireo fitaovana fototra ho an'ny fanitsiana loko sy ny fanitsiana sary, dia tandremo Fotor. Mety ho lasa safidy tonga lafatra ho anao izy noho ny tombontsoa marobe.
Ny iray amin'izy ireo dia ny tsy fisian'ny dokam-barotra, izay mahazatra an'ireo mpanova sary amin'ny tranonkala. Fotor dia manana fitaovana, azonao ampiasaina hanangonam-bokatra sy hanodinkodinana sary iray, hanitsiana ny fifanoherana sy ny hasiana, hanovana ny famirapiratana, hampihatra ny sary, ny zana-kazo, ny sticker ary maro hafa.
Raha mampiasa an'ity rindrambaiko malaza ity ianao ary hametraka kinova fitsapana Photoshop Free Trial dia mila vonona voaomana isan-karazany ianao Plugins Photoshop: borosy, lamba, fonosana ary fihetsika.
Raha tokony hisintona ny kinova amin'ilay programa amin'ny loharanom-bolan'ny antoko fahatelo izay tsy azo itokisana ianao dia tsara kokoa ny misintona Photoshop CS6 maimaim-poana amin'ny tranokala ofisialy. Amin'izany no hialanao amin'ny tsy fahombiazan'ny rafitra sy ny olana amin'ny lalàna.
Tombontsoa Photoshop CS6
Sintomy ny Photoshop CS6 Free